UM2 alumni – Association
In addition to having the opportunity to
take part in each and every UM1AA social
activities these companies and
services in collaboration with
UM1AA give its members these
exclusive advantages. These
privileges applied for all members
of UM1AA holding this University of Medicine 2
Alumni Association electronic member card.
Welcome New Member of UM2 Alumni Association
Join UM2 AA
Institute of Medicine2or University of Medicine2was founded in July 1963. Golden Jubilee was successfully celebrated in 2013 and based on the facts arose from the Golden Jubilee, University of Medicine2alumni Association was established in August 2016, with the help and support of current Administrative Body of the University of Medicine 2.
In December 2016, the UM2AA was approved as an official organization by the Ministry of Home and Affairs, Myanmar. Our Association is nonprofitable and nongovernmental organization.
ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဟောင်းများအသင်းမှ ၁. အထွေထွေရောဂါကုနှင့်သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၂. အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ အင်းစိန် ၃. ဝေဘာဂီကူးစက်ရောဂါကုဆေးရုံကြီး ၄. တောင်ဥက္ကလာပ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး ၅ . သင်္ကန်းကျွန်း ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တို့သို့ COVID-19 ကပ်ရောဂါဘေး ကာလတွင် Covid-19 ကာကွယ် ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သလို အသုံးပြုရန် N95 mask, KN95 mask , Surgical gown , Cap, Glove, PPE နှင့် Goggles များ( ၈,၁၉၂,၀၀၀ သိန်းတန်ဖိုး)ကို ၃၀.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့ကလှူဒါန်းပါသည်။ အရေးကြီးကိစ္စများရှိခဲ့ပါကထပ်မံ၍လှူဒါန်းပါမည်။ ……………ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားအထူးလေးစားဂုဏ်ယူလျက်………… ​​ ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) ​​ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဟောင်းများအသင်း(ရန်ကုန်)
MIN HLA MEDICAL TOUR